Dareen Qabyaaladeed Dib Uga Soo Ifbaxay Puntland Kaddib Golaha Wasiirada Cusub Ee La Magacaabay |
Dareen Qabyaaladeed Dib Uga Soo Ifbaxay Puntland Kaddib Golaha Wasiirada Cusub Ee La Magacaabay
Garoowe (GNN):- Golaha wasiirada Puntland ee uu dhawaan ku dhawaaqay Madaxweyne Saciid Cabdullahi Deni, ayaa waxa ay keentay dareen colaad siyaasadeed oo ay kala tirsanayaa qabaa’ilada ku dhaqan Puntland.
Marka beel ahaan loo eego golaha wasiirada Puntland, waxaa loo qeybiyey laba. Marka la isku daro 9 wasiir, waxaa la siiyaya beesha Majeerteen, ayada oo 5 ka mida sagaalkaas laga siisyay beesha Maxmuud Saleebaan ee Majeerteen oo uu ka soo jeedo Deni. Qabaailada kale ayaa waxa loo qaybiyay 9 Wasiir.
Arintaan ayaa waxa ay dib soo nooleysay dareenka horay looga qabay Puntland, oo ahaa in Puntland ay tahay degaan ay heystaan beesha Maxamuud Saleemaan oo ay ayagu isku bad-badalaan maamulkeeda, cida madaxweynaha ka noqonaysana waxaa markastaa laga soo xushaa beesha Maxamuud Saleemaan.
Cabdirahman Faroole (Ciise Maxamuud)
Cabdi Wali Gaas (Cumar Maxamuud)
Madaxweynaha ku xiga Saciid Deni waxa uu laga soo dooran doonaa beesha Ciise Maxamuud
Arintaan ayaa waxa in mudo kasoo horjeeday beelaha ku dhaqan Sool iyo Sanaag iyo kuwa degan degaanka Mudug.
Beesha Carab Maxamuud Saalax ayaa waxa ay soo saartay warmurtiyeed ay uga soo horjeedo magacaabista golaha Wasiiradda oo aan ayaga waxa wasiir ah laga siinin.
Dhanka kale beesha Leylkase ayaa iyadana waxaa la siiyay hal wasiir oo ay ka biyo diideen ilaa iyo hadda.
Saciid Deni ayaa sheegay in aan waxba laga badalaynin habka loo qaybiyay Golaha Wasiirada. Salaadiinta Puntland ayaa iska fogeeyay in ayan wax shaqo ah ku laheynin, oo aan lagala tashan magacaabista golaha wasiiradda.